MSF waxay ugu baaqaysaa dhamaan dagaalyahanyada inay qadiriyaan rugta caafimaadka ee Guri Ceel - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
MSF waxay ugu baaqaysaa dhamaan dagaalyahanyada inay qadiriyaan rugta caafimaadka ee Guri Ceel
27.12.2008 | Gobolka Galgaduud, Koonfura iyo bartamaha Soomaaliya, War-Saxaafadeed
War saxaafadeeda Dhakhaatirta aan Xudduuda Lahayn (MSF)
Dagaal ayaa ka dhacay magaalada Guri ceel ee gobolka Galgaduud wadanka soomaaliya. Abaarihii 10kii subaxnima sadax qof ayaa ku dhaawacantay oo ku sugnaa Rugta Caafimaadka ee Guri Ceel. Hooyo iyo aaba iyo canugooda oo caafimaad u joogeen ayaa ku dhaawacmeen mar uu kuhabsaday hoobiya qolka degdega ah. Sadax iyo toban qof oo dhaawac kuwaas oo kala ah laba ciyaal iyo shan haweenay ayaa cisbitaalka imaadeen, sadax qaliin u baahan.Xaaladda adag Galgaduud oo sii korodhay Hay’adda dhakhaatirta aan xudduuda lahayn (MSF) oo taageera oo fidisay Cisbitaalka Istarlin ee magaalada Guri Ceel laga bilaabo 2006, waxay xasuusinaysaa dhamaan kooxaha ka dhagaalamaya soomaaliya mas’uuliyadooda ku aadan xuquuqda insaanka. MSF waxay dhamaan ugu baaqaysaa kooxaha kudagaalamaya inay tix geliyaan goobaha caafimaadka, shaqaaleheedaa iyo bukaanka iyo dadka dhaawaca ah.
“Cisbitaalka Guri Ceel waa cisbitaalka keliya oo bixiyaa khidmad caafimaadeed bukaan oo uga imaada ilaa iyo 250 km” Tom Quinn agaasimaha baraamijta MSF soomaaliya. ” iyadoo ee jiraan gooba caafimaad yarida ee haysato Soomaaliya waxaa muhim ah in qof kasta ayadoo loo fiirinaynin Siyaasada ama dhinaca u ujenjeero in si fudud oo madax banaan ah u tagi karo meelaha caafimaadka oo shaqada kasocoto. MSF waxay codsanaysaa madax baananida cisbitalka iyo bukaanka inay qadiriyaan dhamaan dagaalyahanida.”
MSF oo hay’ad madax banaan oo samafal caalami ah, taas oo tix gelinayso heshiiskii Geneva, waxay bixisaa daryeel caafimaad oo lacag laan ah dadka dhaawaca ah iyo bukaanka ayadoo dhaxdhaxaad ah, u eegaynin qaybah siyaasadda, diimeed, mise kuheebad leh wax ciidan ah.
MSF waa hay’ad aan dowli ahayn oo daryeel caafimaad ka bixinaysay Soomaaliya ilaa iyo 1991 kana fuliso mashaaric caafimaadeed sagaalka gobol ee wadanka.MSF waxay ka shaqaysay Cisbitaalka Guri Ceel (Istarlin) ilaa iyo 2006. 2008dii iskucelcelis 3,700 bukaan ayaa latashi caafimaadeed iyo daaween lacag la’aan ah ayaa hal bil lagafuliyay qaybta bukaan socodka iyo iskucelcelis 330 oo bukaan jiif ah bil kasta. MSF waxay dhuusa mareeb oo ah magaala madaxda Galgaduud iyo Xiin dheer kuleedahay qayb bukaan socod oo la furay Janayo 2008. Iskucelcelis 1,600 oo la tashi caafimaadeed ayaa laga bixiyay.
Tags: Galgaduud, South Central Somalia, guri ceel
Qoraalada kale ee ku saabsan Gobolka Galgaduud, Koonfura iyo bartamaha Soomaaliya
MSF oo soo gabagabeysay taageeradii ay siin jirtay isbitaalka Istarliin ee Guricel
MSF waxa ay dhaawacyo ku daweyneysaa Guriceel
Inkastoo Iska-hor-imaadyo jireen, MSF ayaa sii wadda hawlihii ay ka waday gobolka Galgaduud
Hab la waafajiyey baahida oo wax looga qabto jadeecada